Daawo Sawirro: Maxay tahay sababta C/wali Gaas uu Addis Ababa u aaday? & Qaabka loogu soo dhaweeyay | jubbaland news
Daawo Sawirro: Maxay tahay sababta C/wali Gaas uu Addis Ababa u aaday? & Qaabka loogu soo dhaweeyay
Mar 18, 2017 - Aragtiyood
Madaxweynaha Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo maalmahii la soo dhaafay ku sugnaa magaalada Dubai ee Wadanka Imaaraadka Carabta ayaa waxaa uu maanta gaaray magaalada Addis Ababa ee xarunta dawladda Etihopia.
Gaas ayaa Wasiirka Arimaha Dibada Etiopa Mr. Workneh Gebeyehu kulan gaara kula yeeshay magaalada Addis ababa.
Kulankan gaarka ah ee Madaxweynaha Dawladda Puntland iyo Wasiirka Arimaha Dibada ee Ethiopia wada yeesheen ayaa waxaa looga hadlay xasiloonida iyo adkaynta nabadgelyada, la dagaalanka Argagaxisada iyo sidoo kale kor u qaadida xiriirka ganacsi ee u dhexeeya.
Sidoo kale kulnaka ayaa waxaa looga wada hadlay isbedelka doorashii ka dhacaday Soomaaliya iyo guud ahaanba siyaasada Soomaaliya iyo sidii hore loogu sii socon lahaa, soomaaliyana loo gaaRsiin lahaa heer wanaagsan oo looga gudbi karo caqabadaha ka jira amaanka iyo heerka nolosha.
Wasiirka Arimaha Dibada ee Dawladda Ethiopia ayaa Madaxweynaha Dawladda Puntland ugu hambalyeeyey doorka wanaagsan ee Dawladda Puntland markasta ka qaadato ladagaalanka burcad badeeda iyo argagaxisada, kooxahaas oo uu ku tilmaamay inay yihiin kuwo caqabad ku ah horumarka iyo xasiloonida Gobolka.
Gaas ayaa uga mahadnaqay Ethiopia xiriirka dhow ee ay markasta la leedahay Puntland, isagoo dhinaca kale tilmaamay inay xiligani jiraan Abaaro iyo colaado soo noqnoqday oo ku baahay Soomaliya, gaar’ahaana Puntland ay abaarahaasi ay ka geysteen macaluul iyo haraad xoogan oo dabar jaray dad iyo duunyoba, islamar’ahaantaana xaalufiyey deegaan ka dulka.